Chhaharaa | अख्तियारलाई स्वइच्छाले काम गर्न दिऔं ।
अख्तियारलाई स्वइच्छाले काम गर्न दिऔं ।
यहाँ न्याय निसाफ हराएको छ । जहाँ न्याय निसाफ हराउँछ त्यहाँ विकासको गति सुन्य हुन्छ । न्यायलयलाई नै भ्रष्टाचार व्यभिचार, नातावादमा चुर्लुम्म डुबाइएको छ भने त्यहाँ कसरी न्याय निसाफ पाइन्छ । स्वयं न्यायधिश र वरिष्ठ वकिलहरुबाटै देशको सर्वाेच्च न्यायलय सर्वाेच्च अदालत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको कुरो न्याय मूर्तिहरुबाटै पुष्ट्याइ भइसकेको छ । नेपालमा न्यायलयको सर्वाेच्च व्यक्ति नै विचौलियाको काम गर्छन् भने त्यो देशका जनताहरुले कस्तो प्रकारको न्यायनिसाफको आशा गर्ने ? कुरो प्रष्ट छ । जहाँ कुशासन, व्यभिचार हावी छ, जुन देशमा न्याय निसाफ हराएको छ त्यो देशमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध, डकैत जस्ता जघन्य अपराधहरुले शिर ठड्याउँने नै भए । त्यही भइरहेछ हाम्रो मुलुक नेपालमा । नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने कार्यालयका खरदार देखि मन्त्रालयका सचिवसम्म र मन्त्रिहरु समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा पुर्जि थमाएर बयान लिए पनि अदालतले भ्रष्टाचारलाई मात्र होइन ज्यानमाराहरुलाई समेत नगन्य ढलौटमा छुटाएको दृष्टान्त छ । यहाँ अख्तियारको हातखुट्टा बाँधिएको छ । उसले माथिकै आदेश पालना गर्नुपर्छ । माथिकै आदेश पालना गर्नुपरे पनि यहाँ भ्रष्टाचार हराउँछ भन्नु दिउँसै आकाशमा तारा खोज्नु सरह हो । यदी मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्नुनै छ भने नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई तोकिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।
विश्वका कैयौ मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनी कार्वाही मृत्युदण्ड समेत तोकिएको छ । हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा समेत लागुऔषध र भ्रष्टाचारजन्य कानूनी सजाय फाँसीकै रुपमा दिने गरिएको छ । विडम्बनाको कुरो नेपालमा भने भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई दूधले धोएर चोख्याउने काम गरिन्छ । यो मुलुक र मुलुकवासीको निमित्त ज्यादैनै घातक विषय बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा जसरी भए पनि लोकतान्त्रिक उपहास जनताको घाटी निमोठेरै भए पनि देशको आर्थिक स्थिति डामाडोल पारेरै भए पनि, र जस्तो सुकै गठबन्धन र तालमेल गरेरै भए पनि सरकारमा टिकीरहने गर्दछन् । अहिले यही उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् गठबन्धन दलहरुले यो मुलुकमा हालसम्म कुनै पनि सरकार जनभावना अनुकूल हुन सकेन । वर्तमान गठबन्धन सरकार पनि उही स्वरुपको देखियो । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालिने कुनै पनि कार्यहरु सरकारमा रहेका पार्टीहरुका सांसद र मन्त्रिहरुलाई सही हुन सकेन जसले गर्दा यहाँ सबैले खुल्ला रुपले भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा आफुलाई गणतान्त्रिक मसिहा भन्ने दलहरुबाट देश र जनताले कस्तो राहत पाउँलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।